Dagaal yahano u dhashay Suuriya oo ku jira safka hore dagaalka Azerbaijan iyo Armenia | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dagaal yahano u dhashay Suuriya oo ku jira safka hore ...
Dagaal yahano u dhashay Suuriya oo ku jira safka hore dagaalka Azerbaijan iyo Armenia
Ma ogryn in dagaal geli doono,” waxaa sidaas yiri Cabdullaahi( ma ahan magaciisa rasmiga ahaa).
Weriye BBC ka tirsan oo xiriir la sameeyay ninkan ku sugan dalka Azerbijan ayaa sheegay in uu ka cabsi qabo in la qabto isaga oo farrimaha soo dirayo.
“Waxay nagu yiraahdeen waxaad aadeysaan Azerbaijan si aad u ilaalisaan saldhigyada militariga ee ku yaalla xadka, waxaan heleysaan 2000 oo doolar” ayuu yiri Cabdullaahi.
“Xilliggaas wax dagaal ah ma jirin, ma aanan helin wax tababar militari ah”
Toddobaad kadib ninka da’da yar ee u dhashay Suuriya wuxuu billaabay inuu ka qeybgala dagaal uusan ogsoneyn sababta uu uga qeybgalaya iyo u dagaalamidda dal uusan waligii arkin.
Tababar la’aan dagaal lama galayo
Inta badan shacabka ku nool waqooyiga Suuriya sida Cabdullaahi waxay la daala dhacayeen dhibaatada ay ku reebeen dagaallada, ra’iyi uruurin dhawaan la sameeyay waxay muujineysaa boqolkiiba 81 shacabka dalkaas in wax ka yar 50 doolar haddii ay heli lahaayeen bishiiba ay noloshooda wax kusoo kordhin laheyd.
Markii Cabdullaahi loo ballaan qaaday lacag 40 jeer ka badan middaas si uu ilaaliyo saldhigyada militari ee ku yaalla Azerbaijani toddobaadkii lasoo dhaafay waa uu aqblay codsigaas.
“Xilliggaas wax dagaal ah ma jirin, waxaana nalaga soo qaaday waqooyiga Suuriya, waxaana nala geeyay tuulada Hour Kells, ciidamada mucaaradka ee Suuriya ayaa waxay naga reebteen dhammaan agabkeeni sida lacagta, teleefoonada iyo dharka si aanan inoola aqoonsan marka aan gaarno Azerbaijan” ayuu yiri Cabdullaahi.
Cabdullaahi wuxuu markii dambe gacanta ku dhigay teleefonkiisa.
“Markii dambe waxaa inala geeyay garoonka diyaaradaha ee Antep ee dhaca koonfurta Turkiga, kaddib waxaan gaarnay Istanbul oo aan usoo galnay ilaa hal saac iyo 40 daqiiqo, markii dambe waxaa na qaaday diyaarad ay leedahay shirkadda Azeri Airlines, waxaana la geeyay Azerbijan, waxaana na la geeyay saldhig militari oo ku yaalla xadka, ma aanan helin wax tababar militari ah”
Gobolka uu ku sugan yahay Cabdullaahi ee Nagorno-Karabakh waa halka xuddunta u ah dagaallada tobonaanka sano soo socday, dhulkan buuraleyda ah waxaa uu ka tirsan yahay Azerbaijan balse waxaa gacanta ku haya shacabka Armeeniyiin ah.
Armenia iyo Azerbaijan waxaa gobolkan ku dhexmaray dagaal xooggan sanadihii siddetamaadkii iyo sagaashamaadkii, waxaana dagaalladaas ku dhintay tobonaan kun oo qof halka malaayin qofna ay guryahooda isaga qaxeen.
Waxay labada dal horey u wada gaareen heshiis xabad joojin inkasta oo aanan weligiis la dhaqan gelin, dagaalladan waxay ahaayeen kuwa dhaca mararka qaar.
“Ma aanan ogeyn halka ay ku sugnaayeen cadowga”
Axaddii oo ay taariikhda aheyd 27-da September, Cabdullaahi wuxuu muddo toddobaad ah ku sugnaa xero militari isaga iyo dad kale oo Suuriyaan ah halkaas waxay u joogaan sidii ay lacag ku heli lahaayeen balse aanay dagaal u joogin, waxaana lagu amray inay isaga dhaqaaqaan halkaas.
“Waxay nagu qaadeen gawaarida dagaalka anaga oo xiran dareeska ciidamada Azerbaijan, dhamaanteen waxaan ku hubeysnayn qoriga lagu magaacabo Kalashnikov”
Dagaal xooggan ayaa mar kale ka dhacay gobolka Nagorno-Karabakh.
“Baabuurkii aan saarneyn ayaa joogsaday, waan naxnay markii aan aragnay anaga oo taagan safka hore ee dagaalka, xitaa ma aanan garaneyn halka ay cadawga ku sugan yihiin, waxaa bilowday qaraxyada, dadka cabsi ayaa gashay waxay doonayeen in guryahooda ay ku laabtaan, waxaa agteena ku soo dhacay madfac, waxaa ku dhintay afar qof oo u dhashay Suuriya halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen” ayuu yiri Cabdullaahi.
Ilo wardeeyo ku sugan waqooyiga Suuriya ayaa BBC u sheegay in halkaas laga hadal hayo dadka kasoo jeedo Suuriya ee ku dhintay Azerbaijan.
Waxaana dagaalka ku dhaawacmay 70 qof oo Suuriyaan ah, sida uu Cabdullaahi sheegayo, dadka ma helaan daryeel caafimaad.
Armenia waxay sheegeysaa in 4,000 qof oo u dhashay Suuriya la geeyay Azerbaijan tan iyo markii uu dagaalka bilowday, waxaana arrintaas beenisay Turkiga. madaxweynaha Azerbaijan Ilhaam Aliyey ayaa dhankiisa sheegay in Turkiga uusan qeyb ka aheyn dagaalka u dhexeeyay labada dal.
Turkiga iyo Azerbaijan waxay wadaagaan xiriir dhanka siyaasadda iyo dhaqanka bulshooyinka ku nool.
Ma ahan markii ugu horreeyay oo dagaalyahano Suuriyaan ah ee ka dagaalamaan meel ka baxsan dalkooda iyaga oo dagaalyahanadaas uga sii gudbayo Turkiga.
Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobey bishii May ee sanadkii hore ayaa lagu sheegay in dagaalyahano ka yimid waqooyiga Suuriya ay gaareen dhinaca Turkiga waxayna uga sii gudbeen Libya si ay uga dagaallamaan halkaas, muuqaal laga soo duubay dagaalyahano Suuriyaan ah oo ka dagaalmayay Libya ayaa waxaa ka dhashay caro, Turkigana waxaa lagu eedeeyay in uu hurinayo colaadda.
Sida laga soo xigtay, Raami Cabdul Raxmaan oo ah agaasimaha ha’yadda dusha kala socoto arrimaha xuquuqul insaanka Suuriya ayaa sheegay in mucaaradka hubeysan ee Suuriya ay ku kala qeybsan yihiin arrinta ah in dagaalyahano loo diro Azerbaijan.
Kooxa xiriirka la leh Turkida ayaa u muuqday kuwa u dhaga nuglaanayo codsiga Turkiga.
Halka kooxaha ku sugan magaalooyinka Xums iyo Ghouta ayaanan dan ka laheyn inay ku biiraan dagaalka ay u arkaan in uu u dhexeeyo Muslimiinta Shiicada ah ee Azerbaijan iyo kiristaanka Armenia.
Farriinta ugu dambeysa
Weriyaha la hadlayay Cabdullaahi wuxuu sheegay in codka uu ka go’ay Cabdullaahi, wuxuu u maleeyay in la arkay ama la qaatay telefoonkiisa, balse waxaa sidoo kale laga yaabaa in deegaankii uu ku sugnaa uusan laheyn khad internet ah oo xooggan taas horseeday inay is maqli waayaan.
Mid kamid ah hadalladiisa ugu dambeeyay xilliggaas wuxuu ahaa.
“Markii uu bilowday dagaalka, waxaan isku daynay in aan u sheegno madaxda in aan dooneyno in aan dib ugu laabano Suuriya balse waxay nagu yiraahdeen ma tegi kartaan, waxay inoogu hanjabeen in aan muteysan doono xabsi muddo dheer qaadan doono waa haddii aan ka qeyb geli weyno dagaalka, marka aad si u eegtid waxaan nahay dad xoog lagu haysto”
Previous articleDuulimaadkii u kala gooshi jiray Muqdisho iyo Kampala oo maanta ka biloway Garoonka muqdisho
Next articleXiliga Xildhibaanada iyo Sanatoorada la adooranaayo oo la shaaciyey
More than 60 inmates die at Mogadishu Central Prison
Ra iisal wasare Kheyre oo Muqdisho soo gaaray wax...